नेपाली समय अनुसार मंगलबार राति ११ बजेदेखि यसलाई देख्‍न सकिने प्राध्यापक अर्यालले बताए। यसका लागि विभिन्न मुलुकहरुले भर्चुअल अब्जर्भेसन गर्ने गरेका छन्। तर, यो छुद्र ग्रह हेर्नका लागि टेलिस्कोप आवश्यक पर्छ। प्रकाशित : वैशाख १६, २०७७ १९:५५
चमेराबाट कोरोना भाइरस फैलिएको हो ?
चमेराबारे धेरै नै नकारात्मक कुरा फैलाएको भन्दै दक्षिण एसियाका चमेरा अनुसन्धानकर्मी चिन्तित
वैशाख १३, २०७७ गोविन्द पोखरेल
काठमाडौँ — कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे यतिबेला वैज्ञानिकहरुले विभिन्‍न दाबी गरिरहेका छन् । चमेरो हुँदै कुनै समुद्री जीवमार्फत मानिसमा कोरोना भाइरसको स‌ंक्रमण भएको चर्चा अलि धेरै भएको छ । कोरोना भाइरसको मुख्‍य स्राेत चमेरो भन्दै चर्चा परिचर्चा हुन थालेपछि चमेराका बारेमा खोज अनुसन्धान गर्दै आएका अनुसन्धानकर्मी चिन्तित देखिएका छन् ।
चमेरासम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आएका दक्षिण एसियाका ६४ जना कायरेप्टेरोलोजिस्‍ट (चमेराको अध्ययन गर्ने)हरुले कोभिड–१९ चमेराबाट फैलिएको आरोप निराधार र गलत भएको बताएका छन् । उनीहरुले कोभिड–१९ चमेराका कारण नफैलिए र नकरात्मक तथ्यहरुको पछाडि नलाग्न पनि आग्रह गरका छन् ।
नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तानका अनुसन्धाकर्मी एवं संरक्षणकर्मीहरुले कोभिड–१९ फैलनुमा चमेराको कुनै भूमिका नरहेको प्रष्ट्याएका हुन् । हालसम्म कुनै पनि वैज्ञानिक अनुसन्धानले चमेराका कारण कोरोना भाइरस फैलिएको भन्ने प्रमाणित नगरेको उनीहरुको दाबी छ ।
भारतका चमेरा अनुसन्धानकर्मी रोहित चक्रवर्तीले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भने, ‘सार्स–कोभ–२ को उत्पत्ति कहाँबाट भएको भन्ने कुरा अहिलेसम्म थाहा छैन । वैज्ञानिक आधारबिना चमेरालाई महामारीको दोष लगाउन थालिएको छ । यो कार्य गलत हो ।’
कोरोना भाइरस जीव हुँदै मानिसहरुमा सरेको बताइएको छ । चीनको वुहानमा रहेको मासु बजारबाट कोरोना विश्वभर फैलिएको थियो । उनीहरुले महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ र चमेरामा भेटिएको ब्याट कोरोना भाइरस फरक रहेको बताएका छन् ।
सार्स-कोभ-२ र चमेरा भाइरस
चमेरामा आरए–टीजी–१३ नाम गरेको ब्याट कोरोना भाइरस भेटिएको र यो सार्स-कोभ–२ भन्दा धेरै नै फरक रहेको श्रीलंकामा चमेरा सम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आएका थारक कुसुमिन्डाले कान्तिपुरलाई बताए । उनले भने,' यी दुई भाइरसहरु कोरोना भाइरसको एउटै परिवारभित्र त पर्छन् । तर,यी भाइरसहरु करिब ४० देखि ७० वर्षअघि नै छुट्टिएर उत्परिवर्तित भएको नयाँ अनुसन्धानले देखाएको छ । ' मानिसहरुमा लागेको सार्स-कोभ-२ लगाउनुमा चमेराको कुनै योगदान नरहेको उनले दाबी गरे । कुनै एउटा माध्यम (होस्ट)हुँदै यो भाइरस मानिसमा आइपुगेको उनले बताए ।
पर्वतमा भेटिएको नक्कली बोक्सी (लाइडोडर्मा लाइरा) चमेरो । तस्बिर सौजन्‍यः सञ्‍जिव बानियाँ ।
अनुसन्धानकर्ता कुसुमिन्डाले चमेरालाई नै दोषारोपण गरेर केही नहुने बताउँदै उनले अन्य जीवहरुमा पनि अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताउँदै विश्‍वभर वन्यजन्तुको चोरी सिकारी र बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताए ।
इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च(आईसीएमआर)ले गरेको अनुसन्धानबाट दक्षिण एसियामा दुई प्रजातिका चमेरामा ब्याट कोरोना भाइरस भेटिएको जनाएको छ । र यो कोरोना भाइरस अहिले माहामारीको रुपमा फैलिएको सार्स कोभिड–२ नभएको र कोभिड–१९ को संक्रमण नगर्ने आईसीएमआरले जनाएको छ ।
चमेराको दिसाबाट कोरोना फैलने कुरा पनि गलत भएको अनुसन्‍धानकर्ता चक्रवर्तीले कान्तिपुरलाई बताए ।
सार्स-कोभ–२ भाइरसको उत्पत्ति कहाँबाट भयो भन्नेबारे हालसम्‍म कसैले ठोस तथ्‍य पत्ता लागेका छैन । कसैले वुहानको सी फूड मार्केटमा कुनै जीवको मार्फत हुँदै मानिसमा पुगेको अनुमान गरिएको छ । कसैले चमेराबाट सरेको भाइरस कुनै अर्को जीवमा गएर त्यहाँ उत्परिवर्तित भएर मानिसमा पुगेको दाबी गरेका छन् । कसैले सालक हुँदै मानिसमा सरेको दाबी गरेका छन् भने कसैले चमेरामा भएको भाइरस सर्पमा पुगेर उत्परिवर्तित भएर मानिसमा पुगेको बताइरहेका छन् ।
सन् २०१३मा अनुसन्धानकर्ता शी झेङ लीले एउटा अनुसन्धान गरेकी थिइन् । हर्स सू ब्याट प्रजातिमा भेटिएको आरए–टीजी–१३ ब्याट कोराना भाइरस र सार्स–कोभ–२ को जेनोम म्याच गराउँदा ९० प्रतिशत उस्तै रहेको पाइएको थियो । उक्त अनुसन्धानले यी भाइरसकोव पुर्खा एउटै रहेको दाबी गरेको थियो । तर,यी भाइरसहरु ३०देखि ७० वर्ष पहिले नै छुट्टिएर उत्परिवर्तित भएको उनको अनुसन्धानले जनाएको छ ।
चमेरा अनुसन्धानकर्मीहरुले पनि यही विषयलाई लिएर चमेरालाई रोग फैलाएको आरोप लगाउनु गलत भएको बताएका छन् । चमेरा अनुसन्धानकर्मीहरुका अनुसार दक्षिण एसियामा दुई वटा चमेराका प्रजातिमा ब्याट कोरोना भाइरस भेटिएको बताए । तर उक्त भाइरस सार्स–कोभ–२ भन्दा भिन्नै रहेको जनाएका छन् ।
आईसीएमआरले बदुरा चमेरो ‘इन्डियन फ्लाइङ फक्स’ र जिब्रो पड्काउने फलाहारी चमेरो ‘फुल्भोस फ्रूट ब्याटमा’ मा पनि ब्याट कोरोना भाइरस भेट्टाएको थियो ।
चमेरामा धेरै भाइरस किन पाइन्छन् ?
चमेरा उड्न सक्‍ने एक मात्र स्तनधारी जीव हो । चमेराको यही विशेषताले गर्दा उठ्नका लागि उसलाई धेरै नै ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ । उड्ने क्रममा धेरै नै उर्जा चाहिने भएकाले यो जीवको मेटाबोलिजम धेरै छिटो हुन्छ । अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार उड्नका लागि धेरै नै उर्जा चाहिदा शरीरमा कोषहरु छुट्टिने र फ्री रेडिकल्सहरु निर्माण हुने गर्छन् । यो विरुद्ध लड्नका लागि चमेराको प्रतिरोधात्मक क्षमता अन्य स्तनधारी जीवहरुको भन्दा दाह्रो हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
विभिन्‍न भाइरसहरु शरीरमा आउँदा चमेराको प्रतिरोधात्मक क्षमताका कारणले संक्रमण हुन नसक्‍ने र लामो समयसम्म ती भाइरहरु चेमरामा रहने अनुसन्धानले देखाएका छन् । यस्ता भाइरहसहरु बेला बेला घर पालुवा जनावारमा पुग्‍ने र त्यहाँ उत्परिवर्तित भएर मानिसमा जाने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
पोखराको चमेरे गुफामा बसेका चमेरा । तस्बिरः भीम घिमिरे/कान्तिपुर
अनुसन्धानकर्ता चक्रवर्ती भन्छन्,'चमेराको यही प्रतिरोधात्मक क्षमताको अध्ययन गरेर विभिन्‍न ओषधिहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । अफवाह र यसप्रति नकारात्मक धारणा नबनाई अनुसन्धान गरिनुपर्छ ।'
चमेराबाटै निपा भाइरस,मर्स भाइरस लगायतका रोगहरु सरेको बताइन्छ । अर्का अनुसन्धानकर्ता कुसिमन्डा अन्य जीवहरु पनि भाइरसको स्रोत भएको बताउँछन् । उनले भने,'कुकुरबाट रेबिज सर्छ । अन्य जीवहरु पनि भाइरसको स्रोत हुन् तर चमेरालाई मात्रै सबै भाइरसको जड हो भनेर दोष दिइनु गलत हो । '
चमेरालाई नै रोग फैलाउने मुख्‍य स्रोत भनेर अपव्याख्या गरिएपछि अनुसन्धानकर्मीहरु चिन्तित् छन् । चमेरा अनुसन्धान तथा संरक्षण संघ नेपालका अनुसन्धानकर्ता सञ्जिव बानियाँले अन्य वन्यजन्तुहरु पनि भाइरसको स्रोत हुने तर यसरी चमेरालाई नै जोडिनु गलत रहेको बताए । उनका अनुसार चमेराले पारस्थिति प्रणालीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।
बालीमा लाग्ने किरा, फट्यांग्राहरु खाइदिने, परागसेचन गराउने, पेस्ट कन्ट्रोलको काम चमेराले गर्ने बानियाँले बताए । चमेराले आर्थिक रुपमा मानिसको धेरै सहयोग पुर्‍याएको अनुसन्धानकार्मीहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै,अम्बा,आँपलगायतका फलहरुको परागसेचनमा पनि चमेराले भूमिका खेल्‍ने भुटानका चमेरा अनुसन्धानकर्ता सञ्जय छिरिङ्ले कान्तिपुरलाई बताए । उनले भने,'चमेरासम्बन्धी दक्षित एसियामा मानिसहरुमा नकारात्मक धारणा धेरै बनाइरहेका छन् । तर हाम्रो मुलुकमा बाघलाई दिएजसरी नै संरक्षण गरिएको छ ।'
कोरोना भाइरससम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आएका क्यानडास्थित एमसीमास्टर विश्वविद्यालयका अनुसन्धाकर्ता डा. अरिन्जय बनर्जीले पनि यस्ता संक्रामक रोग उत्पन्न हुनबाट जोगाउनका लागि मानवीय क्रियाकलापहरुमा परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिएको चक्रवर्तीले सुनाए ।
अनुसन्धानकर्मीहरुले वन्यजन्तुको ओसारपसारका क्रममा भाइरसको संक्रमणको खतरा भने हुने गरेको बताए ।
दक्षिण एसियामा चमेरालाई हेर्ने नजर कस्तो छ ?
दक्षिण एसियामा चमेराका विभिन्न १ सय ४० प्रजाति पाइन्छन् । ती मध्ये ९ वटा लोपन्मुख रहेको अनुसन्धानकर्ता चक्रवर्तीले बताए । दक्षिण एसियाका केही मुलुकहरुमा चमेराबारे मानिसहरुमा अझै पनि नकारात्मक भाव रहेको बताउँदै यसतर्फ ती देशले चमेरा संरक्षण र यसको महत्व सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने अनुसन्धानकर्मीहरुले बताएका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा ५३ प्रजातिको चमेरा रकेर्ड गरिएको छ । स्‍याङ्जामा पाइने सोर्बाको मुसाकाने चमेरो नेपालमा मात्रै भेटिएको बानियाँले जानकारी दिए । सानो बदुरा चमेरा चेपाङ समुदायले सिकार गर्ने गरेको छन् ।
गुफाहरुमा पाइने ठूलो गोलोपत्रे चमेरो ‘हिपोसिडेरस आर्मिजर’ किरा/फट्यांग्राहरु खाएर बालीलाई जोगाउने काम गरेको बानियाँले बताए ।
भारतको तमिलनाडुमा केही मानिसहरुले चमेरलाई पुज्‍ने गरेको चक्रवर्तीले बताए । यस्तै श्रीलंकामा ३० प्रजातिका चमेरालाई त्यहाँको कानुनले संरक्षित सूचीमा राखेको अनुसन्धानकर्ता थरक कुसुमिन्डाले जानकारी दिए । यस्तै त्यहाँमा मानिसहरुमा चमेरासम्बन्धी भाव नकरात्मक रहेको उनले सुनाए । त्यहाँका मानिसहरु आफन्त मरेपछि चमेरा भएर जन्मिने र पुरानै घरमा फर्केन अन्धविश्‍वास रहेको कुसुमिन्‍डाले बताए ।
भुटानमा चमेरालाई शुभ संकेतको रुपमा लिइने गरेको अनुसन्धानकर्ता सञ्‍जय छिरिङले बताए । उनले भने,'पूर्वी भुटानमा चमेरालाई सम्पत्ति र शुभ संकेतको रुपमा लिइन्छ । घर वरपरि चमेरा आए शुभ संकेतको रुपमा लिने गरिन्छ । ' भुटानका गुफाहरुमा पाइने चमेराले भगावनको सुरक्षा गर्ने समेत जनविश्वास रहेको उनले जानकारी दिए ।
नेपालमा पनि चमेरासम्बन्धी मानिसहरुले हेर्ने नजर भने नकारात्मक नै रहेको पाइन्छ । घर वरिपरि चमेरा तथा उल्लु कराउँदा कतिपय ठाउँहरुमा अशुभ संकेतको रुपमा लिने गरिएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख १३, २०७७ १६:११